मन्दिर जानु फाईदा कि बेफाईदा ? जान्नुहोस यी हुन् १० लाभ | नाइस खबर - गण्डकी प्रदेश, अरू भन्दा खास
मन्दिर जानु फाईदा कि बेफाईदा ? जान्नुहोस यी हुन् १० लाभ
मन्दिर जानु, पूजाआजा गर्नुको अर्थ भगवानलाई खुसी तुल्याउनु मात्र हो ? आफ्नो मनोकांक्षा पुरा गराउनु मात्र हो ? किन यत्तिका मन्दिर बनाइए होलान् ? किन भक्तिभावको संस्कार बसाइए होलान् रु यवत् प्रश्नहरु स्वभाविक रुपमा उब्जन्छन् ।
रोग वा बिरामी हुने भयः नियमित नियमपूर्वक मन्दिर जाने मानिसलाई कुनै पनि प्रकारको रोग तथा बिरामी हुने डर रहँदैन । त्यस्ता व्यक्ति व्रत, उपवास, यम, नियम आदि पालन गर्ने हुन्छन् । उनीहरुको आहारविहार पनि सन्तुलित हुन्छ । तसर्थ यस प्रकारका व्यक्ति हरेक प्रकारका रोगबाट टाढा रहन्छन् ।
मन्दिरमा शिखर वा गुम्बज हुन्छन् । गुम्बजमा टकराएर ऊर्जा एवं धवनि तरंग मानिसमाथि पर्दछ यस्ता परावर्तित तरंग मानव शरीरको आवृत्ति बनाइराख्न सहायक हुन्छन् । यसरी मानिसको शरीरले क्रमशः मन्दिरको भित्री वातावरणसँग सामञ्जस्य स्थापित गर्दछ । यसबाट मानिसले असीम सुखको अनुभव गर्दछ । पहिले स्थापना गरिएका हरेक मन्दिरहरु पृथ्वीका धनात्म ऊर्जाका केन्द्र हुन् ।
प्राचीन मन्दिरहरु आकाशीय ऊर्जाका केन्द्रमा स्थापित छन् । यस्ता धनात्मक ऊर्जा केन्द्र भएका मन्दिरमा खाली खुट्टा जाँदा मानिसको शरीरमा एक किसिमको ऊर्जाको प्रवाह चल्न थाल्छ । उक्त व्यक्ति जब मूर्तिका अगाडिी हात जोड्छ उसको शरीरमा ऊर्जा चक्र चलायमान हुनथाल्छ । जब व्यक्ति मूर्तिका अगाडि शिर निहुराउँछ तब मूर्तिबाट परावर्तित हुने आकाशीय तरंग उसको मस्तिष्कमा पर्छ र मस्तिष्कस्थित आज्ञा चक्रमा असर पार्छ । यसबाट शान्ति प्राप्त हुन्छ भने मनमा सकारात्मक विचार पैदा हुन्छ । दुःखपीडा निवारण हुन्छ अनि भविष्य पनि उज्ज्वल हुन्छ । नांगो खुट्टा भुइँमा हिँड्नाले पाइतालाको पोइन्टमा दबाब पर्छ र ब्लड प्रेसर नियन्त्रित हुन्छ ।
पूजा एक प्रकारको रासायनिक क्रिया हो । यसबाट मन्दिरको भित्री वातावरणमाको पीएच भ्यालु कम हुन्छ, जसबाट मानिसको पीएच भ्यालुमा असर पर्छ । यो आयोनिक क्रिया हो जसले शारीरिक रसायनलाई बदलिदिन्छ । यो क्रियाले अनेकौं प्रकारको रोग ठीक बनाउँछ । यो क्रिया औषधि खुवाएर पनि गराउन सकिन्छ, मन्दिर जानाले यो स्वतः हुन्छ ।
मन्दिरमा बज्ने घन्टले मानिसको मन एवं मस्तिष्कलाई हिलिङ गर्छ । शोधकर्ताहरुका अनुसार मन्दिरको घन्टको एकपटकको ध्वनि मानिसको कानमा ७ सेकेन्डसम्म गुन्जिरहन्छ । यसबाट मन एवं मस्तिष्कमा ऊर्जाको सञ्चार हुन्छ । मस्तिष्कमा असीम शान्ति फैलन्छ । शरीरको इनर्जी लेभल वृद्धि हुन्छ । शारीरिक एवं आत्मिक शान्तिका कारण शक्तिमा बढोत्तरी हुन्छ ।
हरेक दिन मन्दिर जाने व्यक्तिमा तनाव, चिन्ता, अवसाद एवं मानसिक रोग हुँदैन । तर यसका लागि मन्दिर गएर हात जोडेर मात्र पुग्दैन । नियमपूर्वक प्रार्थना, पूजा वा जपपाठ गर्नुपर्छ । मन्दिर गएर उभिने अनि जे मनमा आयो सोही कुरा बडबडाउँदै र्फकने गर्नाले कुनै पनि किसिमको लाभ प्राप्त हुन सक्दैन ।
← निशान भट्टराईको स्वरमा आयो ‘छक्का पञ्जा ३’ को अर्को गीत
पशुपतिनाथमा भक्तजनको भीड →